Hitondra Vokatra Inona ho An’ireo Vahoaka Ao Afrika Ny Brexit Tao Angletera? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 20 Jolay 2016 15:37 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Italiano, русский, عربي, Français, Deutsch, English
Peta-drindrina fanentanan'ireo ankolafy roa tao Londona. Sary navoaka teo ambany fahazoandalana Creative Commons Wikipedia, an'i Philip Stevens.
Mpifidy mitontaly 52% tao Grande-Bretagne no nisafidy handao ny Vondrona Eoropeana (UE) tamin'ny fitsapankevi-bahoaka nampivarahontsana tamin'ny 23 Jona 2016 lasa teo.
Taorian'ny namaranana ireo vokatra, nanontany tena ireo vahoaka manerana an'i Afrika, izay maro ireo firenena no nozanahan'i Grande-Bretagne ary mpikambana ao amin’ny Commonwealth ankehitriny, fikambanana iray iraisan'ny governemanta misy an'ireo firenena mpikambana, izay ny ankamaroany dia zanatany Britanika taloha avokoa, raha toa mba hisy vokany amin'izy ireo fanapahankevitra tsy ho ao amin'ny EU intsony.
Ny fandinihana izay ho dikan'io Brexit io ho an'i Afrika, araka ny anarana nomena azy, dia nanamarika tao amin'ny bilaogy Firenena iray i Afrika i Grieve Chelwa, fa ny fihemorana ara-toekarena ao Angletera, ho toy ny vokatry iray naterak'ilay fitsapankevi-bahoaka, dia anisan'ny lalana iray izay mety hahakasika ireo toekarena Afrikana. Na izany aza, nanao tsoakevitra izy hoe ny fihemorana any Shina no nampanahy bebe kokoa an'i Afrika:
Ohatrinona ny fifanakalozana ara-barotra nifanaovan'i Angletera sy Afrika? Tsy betsaka, raha ny fandehany. Teo amin'ny fanakambanana ny rakitra avy amin'ny Birao Nasionalin'ny Antontan'isa (ONS) ao Angletera sy ny Fihaonamben'ny Firenena Mikambana momba ny Varotra sy Fampandrosoana (UNCTAD) ho an'ny 2014, taona farany izay anananay angon-drakitra azo ampitahaina, dia voakajinay fa ny fanondranana avy ao Afrika mankany Angletera dia manome ny 5% eo ho eo amin'ny fitambaran'ny fanondranan'i Afrika. Manahy bebe kokoa ny fitontonganana ao Shina i Afrika, mpiara-miasa ara-barotra lehibe indrindra aminy hatreto
Nitondra tsoakevitra mitovitovy amin'izany izy mikasika ny lanjan'ny fampiasam-bola ataon'i Angletera ao Afrika. Nofaranan'i Chelwa ny tombantombany tamin'ny filazàna fa:
Tsy manana dindo mitovy amin'ireo taompolo maro tany aloha intsony ao amin'ilay tanibe i Angletera. Ary manaporofo bebe kokoa izany ny Brexit. Raha mievona i Angletera, dia hanao toy izany koa i Afrika… eny Afrika hilaza hoe ”Hotahiana anie ianao” ary hanohy ny làlany.
Ida Horner tsy niombon-kevitra tamin’ireo milaza fa mijoro hahazo tombony amin'ilay fivoahana ireo Afrikana tantsaha satria mety ho feo iray ao Eoropa hiteny amin'ny anaran'ireo Afrikana tantsaha i Grande-Bretagne:
Raha ny momba ireo Afrikana tantsaha, nisy fanontaniana napetraka mba ahafantarana raha hahomby kokoa amin'ny tolona ho an'ny zon'ireo Afrikana tantsaha i Grande-Bretagne raha toa ka miala amin'ny Vondrona Eoropeana (UE). Tsy mino aho hoe izany no hiseho. Ny antony dia satria ho very fanampiana avy amin'ny UE eo anatin'ilay Politika Iraisana momba ny Fambolena (CAP) ireo Britanika tantsaha. Tsy mazava hatreto ny ambadik'io araka ny andehanan'ny fotoana, saingy tiako ny hihevitra ny hoe ho laharam-pahamehan'i Grande-Bretagne kokoa ireo Britanika tantsaha miohatra amin'ireo Afrikana tantsaha.
Ny mpitantana ny Royal African Institute manana ny foibeny ao Grande-Bretagne, Richard Dowden, dia nieritreritra fa mety hihena ny anjara asan'i Grande-Bretagne amin'ny maha-feo iray azy ho an'i Afrika ao anatin'ilay fikambanana iraisampirenena :
Betsaka amin'ireo ao amin'ny tanibe no nahita an'i Grande-Bretagna toy ny feo iray ho an'i Afrika any Bruxelles ary ao amin'ny Firenena Mikambana ao New York. Fa amin'izao fotoana izao, hahita ny fihenan'ny fahefan'ireo Britanika bebe kokoa – ivelan'ny UE ary sahanina mpitondra Anglisy madinika – i Angletera sy Pays de Galles. Afaka hahita ny tenany ho voatery hiala ny Filankevi-pilaminana ao amin'ny Firenena Mikambana mihitsy aza i Grande Bretagne?
Mety hisy fiantraikany ratsy ho an'ireo Afrikana mpianatra, mpitsoa-ponenana ary karazana mpifindra monina hafa ny Brexit, ho izy naneho hevitra:
Mety hamahana ny fanavankavaham-bolonkoditra ao Grande-Bretagne ihany koa ilay fialàna. Misy fisalasalana kely hoe ny ankabeazan'ireo mpifidy Miala, matahotra ny fifindràmonina, dia maniry ny hanakana ireo vahiny tsy ho any Grande-Bretagne. Ireo Afrikana – hita betsaka kokoa miohatra amin'ireo Eoropeana – no tsy isalasalana fa ho lasibatra.
Saingy nolazain’i Ida Horner ny endrika tsy mazavan'ny mety ho fiovan'ny fanarahamaso ny fifindràmonina ho an'ireo Afrikana:
Ny antony dia satria, tsy afaka manara-maso ny fifindràmonina avy amin'ny UE i Grande-Bretagne, noho izany mba hampihenana ny fifindràmonina amin'ny ankapobeny ao Grande-Bretagne, dia noferana ny fidiran'ny vahoakan'ny Commonwealth ao Grande-Bretagne. Ny fahitan'ireo mitaky fivoahana, dia ny hoe raha miala ao amin'ny UE i Grande-Bretagne, dia mety hifamadika ny toe-draharaha.
Misokatra ny adihevitra momba ny fandinihana hoe hatraiza no fahamarinan'io fanambarana io, miaraka amin'ny fijerena ireo rakitra efa misy mifandraika amin'izany, ohatra, firy tamin'ireo Afrikana no mba afaka nahazo ilay fahazoandàlana ‘visa’ roa taonan'ny Commonwealth Youth na Ancestry taloha sy amin'izao fotoana izao miohatra amin'ireo Kanadiana, ireo Aostraliana na koa aza ireo Afrikana Tatsimo fotsy hoditra.
Manoratra bilaogy ho an'ny vavahadin-tseraseran'ny vondrona media Financial Nigeria International, i Martins Hile no nanadihady ny vokatry ny Brexit teo amin'i Nizeria, ilay manana toekarena faharoa goavana indrindra iasàn'i Grande-Bretagne ao Afrika, manaraka an'i Afrika Atsimo:
Amin'ny maha mpikambana amin'ny Commonwealth Britanika, mifamatotra akaiky i Nizeria sy Grande-Gretagne. Aorian'i Afrika Atsimo, i Nizeria no mpiara-miasa ara-toekarena faharoa lehibe indrindra ao Afrika ho an'i Grande-Bretagne, misy 6 lavitrisa £ (eo ho eo amin'ny N2,4 lavitrisa , na 8,52 lavitrisa dolara) amin'ny habetsahan'ny fifanakalozana ara-barotra nifanaovana tamin'ny taona lasa. Tamin'ny volana desambra 2014, nanana andianà tetikasa 40 tao Nizeria nanomanana tetibola £232 miliara ho an'ny taona 2014/2015 ny Sampan-draharaha mikasika ny Fampandrosoana Iraisampirenena tao Grande-Bretagne, izay nahitana ireo famatsiambola ho an'ireo tsy mikatsaka tombony ara-bola, tohana ara-teknika ary ireo fiarahana miombona antoka amin'ireo masoivoho hafa misahana fampandrosoana. Mety hisintona ny fampiasambolany amin'ireo tetikasa ho fampandrosoana ao Nizeria, na ho vonjimaika ihany aza, ny teokaren'i Angletera marefo sy bitika.
Nampitandrina izy fa mety hisy fiantraikany goavana eo amin'ny fihetsehampo manindrahindra fisarahana ao Nizeria ny Brexit:.
Raha toa i Grande Bretagne, izay niara-nandrafitra tamin'i Nizeria ka hanomboka hamaha ny fifamatorany, mety hahita ohatra ratsy ho alain-tàhaka ireo mpanakorontana mitaky ny fahaleovantenan'ireo foko nizeriana sasany. Ao anaty fandalinana farany, toa an'i Grande-Bretagne, ny isan'ny brexit ao nizeria dia ho vitsy kokoa eo amin'ny lafiny ara-toekarena; ho fiantraikany ara-politika no lalina kokoa.